DHEGEYSO-Xanuunka Daacuunka oo ka dilaacay Godob-jiraan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xanuunka Daacuunka oo ka dilaacay Godob-jiraan.
Diseembar 13, 2016 9:27 g 0
Godob-jiraan, Dec 14 2016 –Wararkii ugu dambeeyey ee aan kahelayno degmada Godob-jiraan ee gobolka Nugaal iyo deegaamada hoosyimaada ee dhowaan lagula dagaalamay Alshabaab ayaa sheegaya inuu ka dilaacay Cudurka Daacuun ama Daba-dhiig.
Xanuunkaan ayaa lasheegay inuu fara kulul kuhayo dadka kunool deegaamadaasi oo ay horay saamayn ugu yeelatay abaarta culus ee kajirta Puntland.
DHEGEYSO-Barnaamijka Saaka iyo Dunida iyo Maxamuud Cabdi Ibrahim.